Amaro lagu soo rogay Shirkadaha Diyaaradaha ee ka duula Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Amaro lagu soo rogay Shirkadaha Diyaaradaha ee ka duula Muqdisho
Wasaarada Gaadiidka iyo Duulista Hawada dowlada Soomaaliya ayaa soo saartay amaro ku socda Shirkadaha Diyaaradaha rakaabka ka qaada Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad (Oomaar) oo maanta kulan la qaatay Madaxda Shirkadaha Diyaaradaha ayuu ugu gudbiyay amaro oo ay ay Wasaaradu soo saartay.
Waxa uu sheegay Wasiirka in amaradan ay soo saareen ay yihiin kuwa ay uga jawaabayaan cabashooyinka dadweynaha Soomaaliyeed ee raaca diyaaradaha dalka uga imaanayay mudooyinkii ugu dambeeyay.
Mudane Maxamed Cabdulaahi Salaad (Oomaar) ayaa sheegay in Go’aanada ka soo baxay Wasaaradda ay yihiin kuwa looga jawaabayo cabashada rakaabka , waxa uuna xusay in aanan la aqbaleyn in lagu tunto xaquuqda Rakaabka.
Wasiirka ayaa sheegay in la ganaaxi doono shirkadii jabisa amaradan ayy wasaaraxda soo saartay , waxa uuna uga digay Sgirkadaha diyaaradaha in ay jabiyaan amaradan lagu soo rogay.
Amarada Wasaarada kusoo rogtay Shirkadaha Diyaaradaha ayaa kala ah